Iplagi ye-AMP ene-AMP carousel slider - XH
Iplagi ye-AMP ngesilayidi seAMP
I-Accelerated Mobile Pages (AMP) umvelisi wokwenza amaphepha e-AMP kaGoogle , iiplagi ze-AMP kunye ne- AMPHTML ithegi yejenereyitha zixhasa ukudalwa okuzenzekelayo kwe-AMP carousel.
Izilayida ze-carousel ze-AMP zenziwe ngokuzenzekelayo kuyo yonke imifanekiso ekwindawo yokubhaliweyo yenqaku (kwi 'itemprop = articleBody' indawo ).
<amp-carousel> -Ukudityaniswa kweSlider
Ukukhawulezisa uMenzi wamaphepha eselfowuni kwenza ngokuzenzekelayo i-AMP carousel isebenzisa ithegi ye-amp amp carousel ukuba kukho umfanekiso ongaphezulu kwesinye kwinqaku lencwadi!
I-carousel ye-AMP ithatha indawo yomfanekiso wenqaku eliqhelekileyo kwiphepha le-AMPHTML.
Endaweni ye-carousel ye-AMP, kuphela ngumfanekiso wenqaku olulula oboniswayo okanye indawo ehlala ingenanto.
Imifanekiso kwi-carousel ye-AMP inikwe i-caption. Iimpawu ze-tag ze- <img> 'alt =' kunye 'title =' zithathwe kwiphepha lasekuqaleni njengezicatshulwa. Ukuba ezi mpawu azichazwanga kwiphepha lokuqala, umvelisi wamaphepha akhawulezileyo oSebenzisa isicatshulwa senqaku.